#Siyaasad Xumo Iyo Dhaqaale yare Oo Ku Dhuftay Maamulka Somali-land Ilaa inta Uu Xilka Qabtey Biixi - Get Latest News From Horn of Africa
#Siyaasad Xumo Iyo Dhaqaale yare Oo Ku Dhuftay Maamulka Somali-land Ilaa inta Uu Xilka Qabtey Biixi
By axadle	 On Jun 24, 2018 Last updated Sep 13, 2018
Maamulka Somaliland ayaa masiibo siyaasadeed la kulmay mudadii uu hogaanka hayey Muuse Biixi Cabdi iyadda oo ay ku kaceen mawjado dhaqaale xumana.
Kadib markii xukuumadii Siilaanyo hogaaminaayey siyaabo kala duwan u wareejisay ilihii dhaqaalaha ee maamulkaas, ayaa xukuumadii badashay ee Muuse Biixi hogaaminaayey la kulantay dhaqaale xumo baahsan, iyadda oo si ay u yaraso kharashka dawlada dhexe isticmaashna soo koobtay, waxayna meesha ka saartay, misaaniyadii dhexe ee gobolada Awdal iyo Sool oo aan lagu soo darin miisaniyadii sanadkan la ansaxiyey, waxaa iyana meesha ka baxay dhaqaalhii loo isticmaali jiray isku soo dhawaynta beelaha.
Dhaqaalahan oo ay inta badan isticmaali jireen siyaasiyiinta beelaha iyo hogaanka dhaqanka ayaa loo isticmaali jiray qaab cabudhin iyo olole iskugu jira, markii uu meesha ka baxay luflufkiina waxaa bilaabmay kacdoono hoose.
Waxaa kacdoon qori caaradii ahi ka bilaabmay gobolada Bariga ee maamulkaas, iyadda oo markii danbana isku badashay qaab qabiil, waxaa aan dib loo jadiidin heshiis ay beesha caalamku kaalmada si gaar ah ugu siin jireen maamulka Somaliland, waxaa lala wareegay hawadii sarre ee dalka iyadda oo aan la dhagaysan cabashadoodi iyo doodii ahayd lama wareeji karo ilaa heshiis laga gaaro.
Lacag gaadhaysa hal milyan oo dollar oo dawlada fadaraalku ugu deeqday gobolka Awdal oo ay ku dhufatay duufaan, ayaa dib loo dhigay bixintiisa, waxaana la sheegay in si hoose loogu wareejinaayo haydaha samafalka ee laga leeyahay gobolka Awdal, kadib markii madaxweynaha maamulka Puntland uu dawlada fadaraalka u sheegay in ay suurta gal tahay in lacagtaa loo isticmaalo dagaalka ka socda gobolka Sool.
Maanta waxay maamul goboleedyadda dalku bogaadiyeen wajiga cusub ee ay dawlada fadaraalku ula dhaqmayso maamulkaas, iyagga oo ku nuuxnuuxsaday in la xoojiyo dawlada dhexe.